Ungayenza Kanjani I-imeyili Yakho Yokuthengisa Iselula Ibe Nobungane | Martech Zone
"Ngonyaka, ngaphezu kuka-Mashi 2011 kuya ku-Mashi 2012, ukuvula i-imeyili kumadivayisi eselula kukhule ngamaphesenti angama-82.4," ngokwezibalo zeselula iReturn Path. Ukwenza ingxenye yeselula yemizamo yakho yokumaketha nge-imeyili akuseyona imikhankaso esezingeni eliphakeme ye-imeyili; kuyisidingo.
Muva nje, abakwaDelivra bashicilele ukuthi Ungayenza Kanjani I-imeyili Yakho Yokumaketha Iselula Ukuba Nobungane, insiza enikezela ngamathrendi weselula ka-2012, izibalo, nezincomo zendlela yokwenza ukumaketha kwakho kwe-imeyili kulungele izithameli zakho ezisendleleni.
Iphepha elimhlophe lixoxa ngezinto ezintathu ezibucayi zempumelelo ye-imeyili ephathekayo namasu adingekayo ukusebenzisa isu elinjalo.
Iphi izilaleli zakho ezifunda i-imeyili?
Ingabe udala okuqukethwe kwabafundi beselula?
Ingabe ukwakheka kwakho kwe-imeyili kuyasebenziseka?
Ukuze uthole impendulo yale mibuzo futhi uqinisekise ukuthi ama-imeyili akho angena enkathini ephathekayo, landa i-How to Make Your Email Marketing Mobile Friendly whitepaper.
Abathengi abangama-80% bathola kulula ukufunda ama-imeyili wokumaketha kumaselula abo kune-PC. Ngabe wenza ama-imeyili izithameli zakho ezikwazi ukuwafunda kalula futhi ziwaphendule kudivayisi yabo yeselula? Uma kungenjalo, kungenzeka ukuthi uyiswe kudoti. Ungakuvumeli lokho kwenzeke!
Tags: delivraimeyili MarketingUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethii-imeyili ephathekayoizitayela zeselula
May 16, 2012 ku-5: 39 PM
Siyabonga ngokushicilela lokhu. Besikhuluma nje neklayenti namuhla ngokubaluleka kweselula nokuthi kubaluleke kangakanani ukusizakala ngenkathi ikwijika lokukhula elimangalisa kangaka!